Diyaargarowga 12sano Guurada SBC oo Si dar dar leh uga socota Xarumaha SBC – SBC
Diyaargarowga 12sano Guurada SBC oo Si dar dar leh uga socota Xarumaha SBC
Xarumaha Hay’ada warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC waxaa ka soconaya Qaban qaabada u dabaal degga xuska aas aaskii shirkada Warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC waana Sanadguuradii 12aad.
Maalinta Bisha Lixaad ee aynu ku jirno ay ku beegan tahay 16 ayaa sanadkasta waxaa loo sameeyaa xus aad loogaga dareemo deegaanada dhamaan ee laga maqlo Idaacada SBC, halka dunida inteeda kale ee laga aqristo webka SBC Online laga arko qoraalada ku saabsan maalintan muhiimada mudan.
Xarunta weyn ee Hay’ada warbaahinta Soomaaliyeed ee SBC oo ku taala magaalada Boosaaso xarun ganacsiga Puntland ayaa waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga dabaaldegan iyadoo ay soconeyso howl shaqo oo aad u balaaran taas oo ay howlwadeenada shirkadu ugu diyaar garoobayaan u dabaaldega 12jirkooda.
Agaasimaha SBC International Maxamed Deeq Cabdalla C/qaadir ayaa u sheegay SBC Online in u diyaar garowgan uu yahay kii ugu balaarnaa hadii alle idmo ayna u hayaan bulshaweynta Soomaaliyeed ee ay warbaahinta u shaqeyso u adeeg aad u hufan oo ay ka heli doonaan.
Waxa uu u mahad celiyay Maxamed Deeq xaaji Cabdalla dhamaan Dhageystayaasha Idaacada SBC, Aqristayaasha iyo daawadayaashaba, isagoo tilmaamay in talaabo kasta oo ay qaadayaan ay aheyd mid ay iyaga ka tusaale qaataan islamarkaana dhageystaan aaraahdooda iyo wadashaqeyntooda wanaagsan.
Maxamed Deeq Ayaa sidoo kale ka sheekeeyay Heererkii kala duwanaa ee ay Hay’adu soo martay 12kii sano oo ay taagneyd, waxaanu tilmaamay howlihii ugu muhiimsanaa ee ay qabatay iyo sida ay bulshada Afka Soomaaliga ku hadasha ugu bogaadiyeen, waxaanu intaasi ku daray in hadii alle idmo heerka ay maanta taagantahay iyo heer ka weynba ay hiigsaneyso SBC International iyadoo kaashaneysa Taageerayaasha iyo bulshaqeynteeda ku xiran.
Dhageyso Agaasime Maxamed Deeq Cabdalla RIIX AMA DAAR
Sanadii 2001 Bishii 6aad 16 keedii ayaa la daahfuray shirkada Warbaahinta Soomaliyeed ee SBC waxaana laga joogaa 12sano oo dhiman maalmo kooban qura, waxaana hadii alle Idmo Dhageysi iyo qoraalba idinkugu soo gudbin doonnaa Taariikhda SBC, Dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee ay baahisay, iyo barnaamijyo kale oo Xiiso badan kuwaas oo ay ka mid yihiin la hadalka dal iyo dibadba taageerayaasheeda ku xiran .